वाम गठबन्धन: ‘चिनियाँ फ्याक्टर’ ले काम गर्ला ? – kalikadainik.com
वाम गठबन्धन: ‘चिनियाँ फ्याक्टर’ ले काम गर्ला ?
सोमबार, चैत्र १४, २०७८ | १४:५५:५५ |
शरद रिजाल, काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै चुनावी गठबन्धनको विषयले निकै चर्चा पाइरहेको छ। वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई तीन तहकै निर्वाचनसम्म लैजाने सरकारको नेतृत्व गरेका दलमा सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बताइरहेका छन्।
देउवाले वर्तमान गठबन्धनलाई बचाउँदै तीनै तहको निर्वाचनसम्म चुनावी तालमेल गर्ने नीति लिइरहेका बेला उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनमा विदेश मन्त्रीले यही मौकामा नेपालको भ्रमण गरेपछि फेरि बामगठबन्धनको चर्चासमेत हुने गरेको छ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी एकीकृत भइ बनेको नेकपा समेत तीनवटा पार्टीमा बिभाजित बनेको छ। गत वर्षको पुषदेखि बिभाजित बनेर पुर्ववत अबस्थामा फर्किएका एमाले र माओवादीको तिक्तता सतहमा देखिएको छ। माधव नेपालले पार्टी विभाजित गरि नयाँ दल बनाएका छन्।
अहिले कम्युनिष्ट पार्टी एक अपासमा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका बेला के बाम गठबन्धन संभव होलारु यस्तो बिषम परिस्थितिमा एमालेभित्रै नेता घनश्याम भुसालले वाम एकताको एजेण्डालाई प्रखरताका साथ उठाएका छन्।
नेता घनश्याम भुसालले आगामी निर्वाचनमा वामगठबन्धन र समयक्रममा पार्टी एकता समेतको प्रस्ताब पार्टीको पोलिटब्युरो बैठकमै राखेका थिए। उनले ७५५ जनमत कम्युनिष्ट पार्टीको पक्षमा रहेकाले बाम एकता गनुपर्ने जिकिर सहितको प्रस्ताव गरेका छन्। भलै उनको वाम एकता या गठबन्धनको प्रस्ताब उनकै पार्टी नेतृत्वले गम्भीरताका साथ लिएको छैन।
वाम गठबन्धनको चुलिँदो चर्चाकोबीच शुक्रबार माओवादीका नेता बर्षमान पुन स्वास्थ्य उपचारको लागि भन्दै पत्नी ओनसरी घर्ती र नेता देव गुरुङसहित चीन प्रस्थान गरेका छन्। नजिकिँदै गएको स्थानीय निर्वाचन लक्षित गरि बर्षमानसहितका माओवादी नेताको चीन भ्रमणलार्ई नेपालको राजैनतिक वृत्तमा अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको छ।
त्यसको केही दिन अगाडि एमालेका उपाध्यक्ष बिष्णु पौडेलसहितको एक टोली पनि अन्र्तराष्ट्रिय कार्यक्रममा भाग लिएर चिनबाट फर्किएका छन् । निर्वाचनको मुखैमा दुवै पार्टीका प्रभावशाली नेताको चीन भ्रमणलाई राजैनैतिक कोणबाट हेरिएको छ।
माओवादी नेता पुन थाइल्याण्ड हुँदै चीनमा लामो समयदेखि उपचाररत रहेका थिए।उनी स्वस्थ्योपचारकै क्रममा नियमित फलोअपको लागि चीन गएको उनको सचिवालयले दाबी गरेको छ।
यही बीचमा शुक्रबार चिनियाँ बिदेशमन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमणमा आए। उनको आगमन र माओवादी नेतात्रय र केही समय अगाडि बिष्णु पौडेलको चीन भ्रमण राजनैतिक कोणबाट अर्थपूर्ण देखिएको जानकारहरु बताउँछन्।
चिनियाँ बिदेशमन्त्री वाङले नेपालका राजनैतिक पार्टीका प्रमुख नेताहरुसँग भेटवार्ता गरेर आइतबार स्वदेश फर्किएका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीदेखि एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरुसँग भेटवार्ता गरे। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले उनी बसेको मरियट होटेलमै पुगी भेटवार्ता गरे।
यसैक्रममा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङसँग बिकसित पछिल्लो नेपालको राजनैतिक घटनाक्रम र आगामी चुनावको बिषयमा चीनले चासो राखेको प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ।
नेपालको राजनीतिमा पश्चिमा र दक्षिणी प्रभावको बिषय बारम्बार बाहिरिएकै हो। भौगालिक सहजता र सांस्कृतिक सम्बन्धले नेपालको राजनीतिमा भारतीय प्रभाव परेको दृष्टान्तहरु उल्लेख्य छन्।
माओवादी नेता बर्षामान पुनको चीन भ्रमणलाई बिशुद्ध औषधोपचार र नियमित फलोअप भनिएको छ। उनी पार्टी भित्र प्रभावशाली बर्चस्व कायम गरेका नेता हुन्। माओवादीले गत पुषमा सम्पन्न महाधिवेशनमा पदाधिकारी चयन समेत उनकै कारणले रोकिएको नेताहरु बताउँछन्।नेता पुनले गत साता बुटवलको एक कार्यक्रममा एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गर्न सकिने संकेत गेका थिए। एमालेसँग पनि गठबन्धनको ढोका खुला रहेको उनको भनाइ थियो।
एमालेका नेता पौडेल तत्कालीन नेकपा एकताका प्रमुख सुत्रधार मध्येका एक हुन्। फलस्वरुप उनी एकता पश्चात महासचिव भएको बताइन्छ। उनी आफूभन्दा सिनियर नेताहरुलाई पछि पार्दै नेकपा महासचिव भएका थिए।
माओवादी नेता पुन पार्टी भित्र प्रभाबशाली नेताको रुपमा रहेका छन्। उनी अध्यक्ष प्रचण्डको बिश्वासपात्र समेत मानिन्छन्। उनलाई माओवादीको निर्णायक नेता ‘किङ मेकर’ समेत मानिन्छ ।
एमाले माओवादी एकतामा प्रमुख भूमिका निभाएका नेताहरुको चीन भ्रमणले नेपालको राजनीतिमा बाम गठबन्धनको सम्भाबनालाई चीनको मध्यस्थताले निकट तुल्याउने आँकलन समेत गरिएको छ।
नेपालमा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा दलहरुबीच एकता र गठबन्धनको मुद्दा प्रखर भएर आउने गर्दछ। गत स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेस माओवादी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा बाम गठबन्धन हुँदै पार्टी एकता भएको थियो। पछिल्लो राजनैतिक परिघटनामासमेत बाम गठबन्धन या सत्ता गठबन्धन दुबै बिकल्प माओवादीले खुला राखेको माओवादी नेता पुनले बताउँदै आएका छन्।
अर्कोतिर एमाले नेता घनश्याम भुसालले पत्रकार सम्मेलनमार्फत नै बाम गठबन्धन हुँदै एकतासम्मको पहलका लागि आह्वान गरेका छन्। यही परिप्रेक्षमा भएको दुबै पार्टीका प्रभावशाली नेताहरुको चीन भ्रमणले बाम एकताको आशंकालाई थप बल पुर्‍याएको छ।
बिष्णु पौडेल बाम एकताकै पक्षमा रहेको उनका निकटतमहरु बताउँछन्। बाम एकताको विषयमा चिनियाँ पक्षको भूमिका कस्तो रहन्छ भन्ने खुलेको छैन। नेपाल भ्रमणमा रहेका बिदेशमन्त्री याङ यीको भूमिका र चीन भ्रमणमा रहेका नेताहरुको भूमिकाले बाम गठबन्धनको सम्भाबनालाई बढाउने संकेत देखिएको छ ।
नेकपा विभाजित हुन नदिन चीनले ठूलो कसरत गरेको थियो। यद्यपि उसकोे कसरत सफल हुन सकेको थिएन। अहिले चिनियाँ विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण र दुबै दलका प्रभाबशाली नेताको चीन भ्रमणले बाम एकतामा कुनै प्रभाव नपार्ने वामपन्थी नेता तथा चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत टंक कार्की बताउँछन्। उनले चीनले आन्तरिक मामिलामा कहिल्यै पनि हस्तक्षेपकारी भूमिका नखेलेको दाबी गरे।
‘चिनियाँ नीतिले जो सुकै सत्तामा रहेपनि केही फरक पार्दैन। हाम्रो सानो मुलुकको लघुताभास मात्रै हो। उनीहरु सबैसँग समान सम्बन्ध राख्न चाहान्छन्। प्राय चिनियाँहरु सत्तासीनसँग मिलेर सम्बन्ध राख्ने गरेको देखिन्छ,’ कार्कीले डिसी नेपालसँग भने।नेपालमा हरेक बिषयलाई बाह्य प्रभाव मात्रै देख्ने दृष्टिदोष भएको उनको जिकिर छ।
नेपालको भूराजनैतिक कारणले प्रभावले चीनले चासो देखाउनु सामान्य भएको उनले बताए। उनका अनुसार एमाले नेता पौडेल चीनको सामान्य कार्यक्रममा गएका हुन्।
नेकपा बिभाजनको समययमा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतको सकृयता बढेकोे होइन ररु भन्ने प्रश्नमा कार्कीले भने, ‘चिनियाँहरु नेपालमा राजनैतिक स्थिरता चाहन्छन्। त्यसका फ्याक्टरहरु बिभाजित नहोउन भन्ने उनीहरुको अपेक्षा हो। त्यसमा बामपन्थी मात्रै भनइ सवै राजनैतिक शक्तिहरु एकीकृत हुन् र राजनैतिक स्थायीत्व होस् भन्ने अपेक्षा हो,’ उनले भने।
नेपालका दुई कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुको पछिल्लो चीन भ्रमण र चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणले बाम एकतामा कुनै प्रभाव नपार्ने उनको प्रष्टोक्ति छ। उनका अनुसार चीनको नेपालका सबै राजनैतिक पार्टीसँग समान ढंगको डिल हुने गर्दछ।
नेपालमा हरेक कृयाकलापलाई राजनीति देख्ने प्रवृत्ति भएको उनले आरोप छ। चीनमा कम्युनिष्ट पार्टीको सत्ता भएर नेपालमा बामपन्थीप्रति सदासयदा हुन्छ भन्ने सोच केही गैरकम्युनिष्टमा रहेको ‘फोबीया’ मात्र भएको उनको भनाइ छ। dcnepal